Glass Bottle mveliso kunye nabenzi
Ibhotile yotywala eyi-100ml
Ubisi, iijusi, amanzi anokugcinwa kwisikhongozeli esixineneyo somoya ngaphandle kokuthatha ishelufithi.
Ibhotile yobisi ene-Air Tight Rust-Proof yeGold Colour Cap yokubonelela ngamava okusela asempilweni.
Ilungele ubisi, iijusi zakho ozithandayo, ukungcangcazela, i-smoothies, ii-cocktails, okanye amanzi alula.
Ibhotile yamanzi ngeCape Tight Cap ukuze ikunike amava okusela asempilweni.
Zilungele isidlo sakusasa, ii-BBQ, amaqela egadi, imitshato, iipikniki, iihambo zaselwandle kunye nokunye!
Ibhotile yesiselo engenanto engenanto i-1000ml
Ibhotile nganye ibandakanya i-BPA-yasimahla engenakusetyenzwa yePlastiki yeCap- Cap engama-48 MM ngesitywina esiqinileyo. I-Lid Snaps ivuliwe kwaye icinyiwe kodwa igcina ukutywina okungqina ubungqina
YENZIWE E-USA-Azisekho izinto ezingathandekiyo ezimbi kwaye akukho khemikhali zingena kwisiselo sakho, le glasi ayinasikhokelo, inokubuyiselwa, i-100% iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze
Iibhotile zeglasi ezikhulukazi ezikumgangatho ophezulu zenzelwe ukusetyenziswa kwemihla ngemihla nokusetyenziswa kwakhona, ziyatyeba kakhulu kwaye zomelele kakhulu kunezinye “iiglasi ezilahlwayo”. Isicocisi soKhuseleko
Ukonga indawo- Eyenzelwe ngokukodwa ukwanela uninzi lweeshelfini zeminyango ngelixa usongeza imbonakalo yeklasikhi yeebhotile zobisi lweediliya
Ibhotile yesiselo ecacileyo yeglasi eyi-1000ml
Ingqayi egqibeleleyo yokuvundisa amathumbu-asempilweni, ukutya okunyusa amajoni omzimba kunye neziselo ezifana nekombucha, kefir, sauerkraut, kimchi; amathuba anokuphela!
Ngaba unokugcina iziqendu ezikhulu zeziqhamo zakho ozithandayo kunye nemifuno enje ngeminqathe, iasparagus, amapere, iitumato, ipepile, nokunye okuninzi.
UKWAKHIWA OKUQINISEKILEYO: Iibhotile eziphezulu zeflip zenziwe ngeglasi engqindilili kunye neyomeleleyo yokuchasana ngokupheleleyo nefuthe kunye notshintsho lobushushu. Yenziwe nge-polypropylene esemgangathweni yeprimiyamu kwaye ikepusi yocingo yenziwe ngentsimbi engenasici ukumelana nokubola.
I-LEAKPROOF kunye ne-AIR TIGHT CAP: Ikepusi enokuphinda iqinisekiswe ukuba imixholo engaphakathi ihlala ihlaziyekile njengoko wawuyigcinile. Isiciko esivuzayo sobungqina beebhotile zokwenza utywala sakha isithintelo esingangeni moya esigcina iziselo zitywinwe kwaye kuthintela i-carbonation kunye nokubila.
UKUSETYENZISWA KWONKE: Ibhotile yeglasi enesitophu inokusetyenziselwa ukugcina yonke into ukusuka kwiijusi, iviniga, iziselo kunye namanzi ukuya kwioyile, kefir, kombucha, ibhiya, ubisi, iisiraphu nokunye okuninzi. Ngobungakanani belitha e-1, uya kuba nokuninzi onokukukhonza kwiqela elilandelayo.
UKHUSELEKILEYO KUNYE NE-Eco-Friendly: Iibhotile eziphezulu ze-Swing simahla kwi-BPA kwaye ayiqulathanga naziphi na iityhefu, imichiza, i-phthalates kunye nelothe, ezenza ukhetho olukhuselekileyo kuneebhotile zeplastiki. Ngokusebenzisa ezi bhotile zeglasi ziphinde zisebenziseke, unokunciphisa ukusetyenziswa kweplastikhi endlwini yakho.
Ibhotile yesiselo yekepusi eyi-500ml
20 ml ukuya 200 ml ibhotile yesiselo
1000ml ~ 750ml zeplastiki isiciko yesiselo ibhotile
Ibhotile yesiselo eyi-50ml
Ibhotile yotywala eyi-50ml
I-1000ml ngebhotile yesiselo
Ibhotile yesiselo eyi-100ml
Ibhotile yesiselo eyi-150ml